Inguva yekuratidzira ye'Beetlejuice 'Starbucks Kupenya-mu-iyo-Rima Tumbler - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Inguva yekuratidzira ye'Beetlejuice 'Starbucks Kupenya-mu-iyo-Rima Tumbler
Inguva yekuratidzira ye'Beetlejuice 'Starbucks Kupenya-mu-iyo-Rima Tumbler
Iyo tumbler ine yakanyanya
by Trey Hilburn III August 8, 2021 40,354 maonero
Iyo mweya neinonyanya kubata nzira yayo kupinda Starbucks rakafemerwa dhizaini. Tichiri mubishi kutsvaira kwakadzika kusingaperi kweEtsy, takawana crossover inotonhorera yeBeetlejuce uye zvisina kufanira Starbucks
Iyi inotyisa epoxy uye vinyl tumbler inokwanisa zvachose kusanganisa kutaridzika kweStarbucks dhizaini uye kutsiva iyo logo neBeetlejuice. Iyo tumbler inouya neyakasviba uye chena mitsetse dhizaini yakafanana nekutaridzika kwesutu inozivikanwa kwazvo. Mukombe zvakare unopedzisa kutaridzika kwechinhu chose nekupenya-mu-iyo-rima slime inodonha pamusoro pemakona.
Etsy muimbi MulberryTribe inopa iyi rondedzero yechinhu chiri papeji.
“Parizvino ndiri kuchinja kwandinotenga maputi angu kubva kwauri kuti uone musiyano muzvangu zvinyorwa! Saizi rangu remashizha ndizvo zvinoita kuti maputi ave kuita senge izvozvi. Ivo vari NZIRA zvirinani mhando. Ivo ikozvino vane akavhurika uye akavhara anotsvedza akavhara, iwo makanda uye vana 12 oz vanouya neyakaoma epurasitiki mashanga!
Tumbler akafukidzwa mu epoxy yehupenyu hwakareba. Ndokumbirawo unyore mubhokisi re “noti kumutengesi” pa Checkout une zita (zita) raunoda pamakapu ako (kana zvichidiwa)
Ndokumbirawo mubvumire angangoita maviri mavhiki kuti atumire, aya madonhwe ari kuputirwa neAFAxy inogamuchirwa epoxy.
Kana uine chikumbiro chaunoda kuitirwa kana chero mibvunzo, ndapota nditumire meseji kana gadzira rondedzero yetsika! ”
Unogona musoro pamusoro HERE odha yako pachako chaizvo.
Chii chawaifunga nezve iyo Starbucks yakafuridzira Beetlejuce tumbler? Tiudzei muchikamu chemashoko.